Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A July 2011 (14)
Q and A July 2011 (14)
၁။ ဆရာရေ မင်္ဂလာပါ။
၂။ Hi Doctor,
၃။ အသက်က ၃၁ ပါ။ အပျိုပါ။
၄။ ကျွန်တော့် အသက် ၂၉ ပါ။
ဆရာရေ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Pennis က သေးပါတယ်။ အဲဒါ ကြီးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဆေးသောက်ရမလား၊ ဆေးထိုးရမလား၊ ဒါမဟုတ် Pump နဲ့ ဝယ်ကျင့်ရမလား။ အခုကျွန်တော် Pump တော့ ဝယ်ထားတယ်၊ ဘယ်လိုကျင့် ရမလဲ ဆိုတာမသိလို့ ဒီအတိုင်းဘဲ ထားထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြားဖူးတာ အခန့်မသင့်ရင် သွေးကြော ပေါက်တတ်တယ်ဆိုလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ဆရာအနေနဲ့ အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်လေးပေးပါလား။ Side effect လည်း မဖြစ်အောင်ပေါ့။
၁။ Penis enlargement (1) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၁) အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃၅)
၂။ Penis enlargement (2) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၂) အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၇၂)
၃။ Penis enlargement (3) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၃) အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၇၃)
၄။ Penis Pump ကျားအင်္ဂါသုံး ကရိယာတွေ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၁)
Jul 25, 2011 at 8:48 PM,
I like to ask about my husband's problem. He is 37 years old and his left and below eyelid is shaking for5months. May I know why it is shaking for so long and is there any health problem?
Has he consulted any physician? Is it twitching? That means sudden and involuntary movement of the muscles. His BP! Any relevant previous medical history!
ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက်က ၃၁ ပါ။ အပျိုပါ။ ခုရာက်နေတာက (့) မှာပါ။ ခုဖြစ်နေတာက နှာခေါင်းသွေးယိုလာလို့။ အရင်က တခါမှမယိုဘူးပါဘူးရှင့်။ ခုယိုတာ နှစ်ခါရှိပါပြီ။ ပထမတခါတုံးက ရေခဲမုန့် စားပြီး အိပ်တာ မနက်ထမှာယိုတာပါ။ ခုတခါက ကျတော့ နားနဲ့ မနာ ဖဝါးနဲ့ နာပါဆရာ သွေးဆင်းနေတဲ့ အချိန်ပါဆရာ။ ညဘက်ပါဆရာ။ ဒီတခါယိုတာ နဲနဲကြောက်လို့ ဆရာ။ နှာခေါင်းသွေး ယိုပြီးတော့ တံတွေးထွေးလိုက်တာ သလိပ်တွေမှာ သွေးတွေပါလာလို့ဆရာ။ ဘာများဖြစ်နိုင်လဲဆရာ အဲဒါ။
၁။ Nosebleed နှာခေါင်းသွေးယိုရင် ဘာလုပ်မလဲ
ကျွန်တော့် အသက် ၂၉ ပါ။ အခု (့) မှာနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်တုန်းက တုပ်ကွေးဖျားပြီး ဆေးသောက်လိုက်လို့ ပျောက်သွားပေမဲ့ နှာခေါင်းက ပိတ်ြပီး ယားယံကာ တော်တော်အခံရခက်ပါသည် ဆရာဝန်တွေပေးတဲ့ ဆေးကလည်း သောက်သောက်ချင်း ပျောက်ပေမဲ့ ဆေးမသောက်ရင် အရင်လိုဘဲ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး ယားပါသည် အဲဒီနောက်ပိုင်း နဲနဲ သက်သာလာပြီ ဆိုတာနဲ့ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်နဲ့ ဆိုးပါသည်။ တခါတလေ ရင်ဘတ်ကနေ အပှုတက်လာပြီး ခေါင်းတွေ ကိုက်နေပါသည်။ သလိပ်စစ်ပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်တော့လဲ ဘာမှမသိခဲ့ပါ။ city scan ရိုက်ပေမဲ့လည်း ဘာမှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီတုန်းက သလိပ်ထဲမှာ သွေးစကလေး ပါဘူးပါသည်။ အရက် ဆေးလိပ်လည်း မသောက်ဘဲ ဖြစ်နေသည့်အတွက် တခုခုများ ဖြစ်နေသလားလို့ စိုးရိမ်မိပါသည် အဲဒီလိုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က စပြီး လည်ချောင်းထဲမှာ အရာတခုခု ရှိနေသလို ခံစားရပြီး မျိုချရန် ကြိုးစား သော်လည်း မရပါ။နောက်ပိုင်း တဖြေးဖြေးနဲ့ လည်ပင်း ညှစ်သလိုခံစားရပြီး အသက်ရှုသည့်အချိန်မှာ ရှုလိုက်သည့် လေက အေးခနဲ ဝင်သလို ခံစားရပါသည်။ တခါတလေ အသက်ရှု ကြပ်သလို ခံစားရပြီး အာသီးအောက်ပိုင်းမှာ ချောက်ကပ်သလို ခံစားရပါသည်။ နား၊ နှာခေါင်း လည်ချောင်း ဆရာဝန်နဲ့ ပြပေမဲ့လည်း ညာဘက် လည်ချောင်းတွေ ယောင်နေတယ်လို့ ပြောပြီး ဆေးတွေပေးပေမဲ့ ဘာမှ ထှုးခြားမှု မရှိခဲ့ပါ။ အခု ညာဘက် လည်ချောင်း ကနေတဆင့် ညာဘက် ရင်ဘက်အထိ အသက်ရှုရင် ကြပ်ချင်သလို ဖြစ်ပြီး အောင့်နေသလို ခံစားရပါသည်။ ထမင်းစား ရေသောက်သည့် အခါမှာတော့ ပြသနာမရှိပါ။ သလိပ်လည်းကပ်ပြီး allergy လည်း အ၇င်ကတည်းက ရှိခဲ့ပါသည်။ အစားအသောက် ရာသီဥတုနဲ့ မတဲ့သည့်အချိန်မှာ ယားယံပါသည်။ အခုအချိန်မှာတော့ ချောင်းမဆိုးတော့ဘဲ လည်ချောင်း ပြဿနာသာ ကျန်ပါတော့သည်။ ကျေးဇှုးပြုပြီး မြန်မာပြည်မှ လိုအပ်သည့် ဆေးများ မှာယူလို့ ရနိင်ရန် အကှုအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။
ရေးပြီးသား စာ ၂ ပုဒ်ပို့လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ မတူပေမဲ့ အများကြီး အထောက်အကူ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆေးလဲ စစ်ထားတော့ ရောဂါကြီးတာ မတွေ့လို့ စိက်သက်သာရပါ။ သွေးပါတာဟာ နှာချေ၊ နှပ်ညှစ်ရာက သွေးကြေားလေးတွေ ပေါက်လို့ ဖြစ်မှာပါ။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ ရာသီဥတုကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ရဘို့ များပါတယ်။
၁။ Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း
၂။ Allergic rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း